कुन सही? – yalambarfoundation.org.np
क्यालेण्डर भनेको ८ ग्रहहरुको गतिको हिसाब गरिएकोे गणित हो । यो हिसाब एक जातिले गर्नुहुने अर्को जातिले नगर्ने हुदैन । गतिको गणनाको आधार चन्द्रमाको गति वा सूर्यको गति वा दुवैको गतिको आधारमा गरिन्छ । माघ १ गते न्यू लुनार (चाइनीज) क्यालेण्डरको नयाँ बर्षको नजिक हुन्छ भने र बैशाख चाहि हिन्दु क्यालेण्डर अन्तर्गत हुन्छ ।
किरातजन्य जातिहरुले येले तङ्बे, येले दोङ, येले थोचे आदि भनी येले संवत ५०८१ मनाउने गरेका हुन, यसको गणनाको विन्दु खोज्दै जाँदा ३८०० सम्म भेटियो । अहिले जे भेटियो त्यहि शुरु गरौ र ग्रहको गतिको हिसाब शुरु गरौ र पछि अझ प्रमाणिक भेटिएमा त्यसमा जाउला । गणनाको आधार नभेटिएको प्रयोग गर्नु लज्जाजनक हो । संमृद्ध समुदाय बन्न क्यालेण्डर चाहिन्छ । अनिर्णित भई बस्नु भनेको आफ्नो समुदायलाई पछाडी नै राख्नु हो । गणनाको विन्दु भेटिएको ३८००, गणनाको आधार नभेटिएको ५०८१ को विपक्षमा होइन । गणनाको आधार नभएको सवंतलाई प्राज्ञिक क्षेत्रमा मान्यता हुदैन । त्यसैले गणना बैज्ञानिक हुन अनिवार्य छ । ४ बंश अघिको किरातकालको प्रथम राजा यलम्बरको शासनकालको शुरुलाई गणना विन्दु मानिएको हो । हिसाब गरौ १. शाह वंश १४० बर्ष, २. मल्लवंश कति बर्ष?, ३. लिच्छिवी वंश कति वर्ष?, र ४. किरात वंशको शासन कति वर्ष? त्यस अघि महिषपालवंश र त्यो भन्दा अझ अघि गोपालवंश सम्म पाइन्छ । तब कसरी ४ वंश अघिका राजा यलम्बरले शासन गरेको
गणना ५०८१ हुन्छ?
बैज्ञानिकहरुका अनुसार सन् २०२१ माः मेसोपोटामिया सभ्यता ५३२० बर्ष, इजिप्ट सभ्यता ५१७०, सिन्धुघाटी सभ्यता ४६२०, माया सभ्यता ४०२०, ग्रीक सभ्यता २८२०, पर्सियन सभ्यता ४०२०, छोला राजवंश सभ्यता २३७०, चिनीया सभ्यता २२४१, रोमन सभ्यता २०४७, मंगोल साम्राज्य समय ८१४, आज्टेक्स सभ्यता ५९२, इन्का सभ्यता ५८२ र मुगल साम्राज्य समय ४९४ हुन भने यी १३ सभ्यता मध्ये सबैभन्दा पुरानो ५३२० मात्र पत्ता लागेको छ भने कसरी किरात चाहि मेसोपोटामिया सरह र अरु भन्दा अगाडीको के हुन सक्छ?
त्यसैले अब देखि किरात यलम्बर संवत् ३८०० (२०२१) लाई आधार मानी शुभ कामना आदानप्रदान गरौ ।
– यलम्बर फाउन्डेशन,
Author AdminPosted on January 15, 2021 Categories गतिविधि
Previous Previous post: यलम्बर संवतको पुराना क्यालेण्डरहरु
Next Next post: किरात नयाँ बर्ष ३८०० को शुभ कामना ।